သင့်ရဲ့ Ultimate နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောအီးမေးလ် Checklist ပေးပို့! | Martech Zone
ဘယ်တော့မှပျက်ကွက်မည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ခန့် FNAME ဟုအမည်တပ်ထားသောသို့မဟုတ်အခြားစာလုံးမရှိသည့်ပုံတူအလွတ်ပုံများရှိသောကျွန်ုပ်၏စာပုံးထဲတွင်လှပသောအီးမေးလ်တစ်စောင်ရသည်။ ဒါမှမဟုတ်ငါကအပေါ်ရ fuzzy ပုံရိပ်တွေနဲ့ retina display ကို။ ဒါမှမဟုတ်ငါကအဲဒါကိုငါ့ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းမှာဖွင့်ပြီးဖတ်လို့မရဘူး မိုဘိုင်းအီးမေးလ်ကတုံ့ပြန်မှုမရှိပါ.
အီးမေး (လ်) သည်အလေးအနက်ထားရသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုအခြေခံသည့်တွန်းအားပေးမှုသည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်သင်၏စာရင်းပေးသွင်းသူများ၏ရှေ့မှောက်သို့တွန်းပို့လိမ့်မည်။ အီးမေးလ်အ ၀ င်ပုံးများထုပ်ပိုးထားပြီးလူတိုင်းကဝန်ကိုလျှော့ချပြီးစာရင်းပေးသွင်းခြင်းကိုပယ်ဖျက်ရန်ဆင်ခြေဆင်လက်ကိုရှာနေသည်။ ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ spam ဖိုင်တွဲအတွင်းပစ်ခြင်း၊ ဖွင့်ခြင်းမပြုလုပ်မီဖျက်သိမ်းခြင်း၊ စာရင်းသွင်းခြင်းမရှိပဲ (သို့မဟုတ်) အဆိုးဆုံး - SPAM အဖြစ်ဖော်ပြခံရရန်များစွာမလွယ်ကူပါ။
Email Monks ရှိအဖွဲ့သည်အကြံဥာဏ်များမှပြန်လည်ရရှိသည် အီးမေးလ်ထဲ၌ဗွီဒီယိုထည့်ခြင်း ဒီရန် - က အီးမေးလ်ပေးပို့သူများအတွက်ပြည့်စုံသောစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း ပေးပို့ခြင်းကိုနှိပ်ခြင်းမပြုမီဖြတ်သန်းသွားလာရန်!
သင်၏စာရင်းသွင်းသူများထံသို့အီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ရန်အချိန်ရောက်လာပြီးသင်ကြောက်ရွံ့နေမည် SEND ကိုနှိပ်ပါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့အားလုံးအဆင်ပြေနေပြီလားဆိုတာမသေချာပေမယ့်ဘုန်းတော်ကြီးများကကယ်ဆယ်ရေးဆီသို့တစ်ဖန်ပြန်လာဖို့မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့လိမ့်မည်ဟုဖော်ပြထားသည်နှင့်အတူ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုပိုမိုအသုံးပြုရန် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် SEND မနှိပ်မီနောက်တွင်လိုက်နာရမည့်ရှင်းလင်းစာရင်းတစ်ခုရှိရန်အရေးကြီးသည်။ ဒါဆိုဒီမှာသင့်အတွက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းသည်သင့်အားအီးမေးလ်ပို့ခြင်းမှတဆင့်သွားစေသည်။ အီးမေးလ် client ကိုလိုက်ဖက်တဲ့, Inbox previews နှင့်အရာအားလုံးကိုကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုနိုင်ရန်နှင့်သင်မပို့မီတွင်အလုပ်လုပ်ရန်သေချာစေရန် previews ကိုဖွင့်ပါ။ သင်လိုချင်လျှင်သင်ပင်လုပ်နိုင်သည် ပုံနှိပ်ဗားရှင်းကို download လုပ်ပါ ခင်ဗျားဘေးမှာခင်ဗျားရဲ့စားပွဲပေါ်တင်ဖို့
Tags: Spam လိုက်နာမှုရှိသလားspam လုပ်နိုင်သည်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းအီးမေးလ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအီးမေးလ်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းအီးမေးလ် client ကိုလိုက်ဖက်တဲ့အီးမေးလ်ပို့မှုစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းအီးမေးလ်အီးမေးလ် html formatအီးမေးလ်ပုံအယ်လ် tags များအီးမေးလ်လင့်များပွင့်လင်း preview အီးမေးလ်အီးမေးလ်စာသားကိုအီးမေးလ်ပို့ပါအီးမေးလ်အချိန်ဇယားရက်စွဲအီးမေးလ်အပိုင်းလူမှုရေးဝေမျှခလုတ်အီးမေးလ်အီးမေးလ် spam ကိုစမ်းသပ်အီးမေးလ်အကြောင်းအရာလိုင်းlink ကိုဖျက်သိမ်းအီးမေးလ်အွန်လိုင်းအီးမေးလ်မြင်ကွင်းတစ်နာရီကြာအီးမေးလ်များလိပ်စာမှပုံ alt tag များတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကိုစာရင်းပြုစုပါစာရင်း segmentproofreadလိပ်စာပြန်ကြားစာဘာသာရပ်လိုင်းလိပ်စာ